नेपाल बन्दको दिन देशभर कहाँ-कहाँ भयो बम बिस्फोट र आगजनी ? यस्तो छ ताजा अपडेट — Sanchar Kendra
नेपाल बन्दको दिन देशभर कहाँ-कहाँ भयो बम बिस्फोट र आगजनी ? यस्तो छ ताजा अपडेट
काठमाडौँ । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएसंगै देशभर चर्को बिरोध सुरु भएको छ । एमसीसी संसदमा टेबुल हुनुपूर्व नै व्यापक बिरोध प्रदर्शन भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनले एमसीसी पास गरेरै छोड्यो ।
आइतबार संसदमा एमसीसी अनुमोदन भएसंगै बन्द बिरोधी गठबन्धनले सोमबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ । बन्दका कारण देशभरको जनजीवन ठप्प छ ।
बन्दकर्ताले काठमाडौँको सुकेधारामा दूधको गाडी तोडफोड गरेका छन् । चाबहिल र कलङ्कीमा ३ वटा बसमा तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ । सडकमा बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
यस्तै पोखरामा शक्तिशाली बिस्फोट भएको छ । लेखनाथमा बिस्फोट जस्तो चर्को आवाज आएको स्थानीयले संचारकेन्द्रलाई बताए । यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
त्यस्तै काभ्रेको बनेपामा एउटा बम भेटिएको छ, प्रहरीले पनि शंकास्पद वस्तु फेला परेको पुष्टि गरेको छ । बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद बस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ ।
अहिले पुलबजारको खडकखण्ड बन्द गरिएको छ । नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ । शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ । बन्द कर्ताले बन्द सफल पार्न यस्तो बस्ति राखेको प्रहरी अनुमान छ ।
उता नेपाल बन्दको असर सुदुरपस्चिमका ९ वटै जिल्लामा परेको छ । सुदुरपस्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र वैतडी लगायतका जिल्लामा बन्दको प्रभाव परेको छ ।